खुसीको बहार सबै तिर !! बधाइ छ सबैलाइ ! नेपाललाइ फाइदै फाइदा ! - Hamro Nepal Cricket
इतिहासमा पहिलो पटक नेपालले एकदिबसिय मान्यता हासिल गरेको छ।
मेहेनत , लगन्शिलता र परिश्रमले नेपालीहरु माझ खुसीको बहार लिएर आएको छ। नेपालले चार बर्षका लागि एकदिबसिय मान्यता कब्जा गरेको छ।
नेपाली टोलिले अब चार बर्ष सम्म , टि -२० मान्यता , एकदिब्सिय मान्यता , इन्टेर्नसनल कप , तथा राम्रो प्रशिक्षक र राम्रा सुबिधा पाउने छ।
विगत एक महिना नेपाली क्रिकेटका लागि विषेश रहयो । नेपालका लागि नामिबियामा भएको विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टु अनि जिम्बावेमा भइरहेको एकदिवसिय विश्वकप छनौट कुनै चलचित्रको कथा भन्दा कम भएन ।
अन्तिम समयसम्म पनि हार नमानेको नेपालले अन्ततः जुन लक्ष्यका साथ जिम्बावे पुगेको थियो त्यो हासिल गरेरै छोड्यो । त्यो हो एक दिवसिय मान्यता पाउनु । एकदिवसिय हरेक खेलाडीको त्यो सपना हो जसलाई पाउन उनीहरुले दिनरात मेहनत गरे ।
सिमित स्रोत र साधनको भरपुर सदुपयोग गर्दै मैदान बाहिर रहेका हरेक समस्या अनि प्रश्नहरुको जवाफ मैदान भित्रबाट दिए ।
डिभिजन टु मा राउन्ड रोविन लिगका अन्तिम तीन खेलमा चमत्कारिक प्रदर्शन गर्दै छनौट खेलमा स्थान बनाएको नेपालको सुरुवात राम्रँे भएन ।
तर अन्त्य भने सुखद रह्यो । समुह बी मा रहेको नेपालले सुरुवाती तीन खेलमा हार बेहोर्यो ।
जिम्बावे, स्क्टल्यान्ड र अफगानिस्तान संग हारेपछि सुपर सिक्समा नपुगेको नेपालले अन्तिम खेलमा हङकङलाइ हरायो । जसले नेपालको एकदिवशीय पाउने सपनालाइ मर्न दिएन् ।
कठिन परिस्थितीको सामना गर्दै जीत हात पार्नु नेपाली टिमको विषेशता हो । प्ले अफमा पपुवा न्युगिनीलाइ हराएपछि नेपाल अब विश्व क्रिकेटको असली मैदानमा प्रवेश गरेको छ ।
यहाँबाट नेपालका लागि अवसरै अवसरका धेरै ढोकाहरु खुलेका छन । नेपाल १२ टेस्ट खेल्ने राष्ट्र, नेदरल्यान्डस, स्कटल्यान्ड, युएईपछि आइसीसी वरियतामा १५ औं स्थानमा रहेको छ ।
सन् १९९६ देखी अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा पाइला टेकेको नेपालले डिभिजन पाँच, चार हुदै एकदिवसिय मान्यतासम्मको यात्रा तय गरेको हो । तर यो सफलतालाइ नेपालले कसरी सदुपयोग गर्छ भन्ने प्रश्न भने यथावत छ ।
किनकी २०१४ मा ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकप खेलपछि नेपालको क्रिकेटले फड्को मार्ने आंकलन गरिएको थियो । तर क्यान निकम्मा हँुदा नेपाल त्यसपछिको विश्वकपमा छनौट हुन सकेन । टिमले एकदिवशीय अथवा टेस्ट मान्यता पाएपनि क्यानको समस्या समाधान भएन भने खेलाडीले हात पारेको यो सफलता बालुवामा पानि हालेजस्तो नै हुनेछ ।